Xayeysiiska kooxaha cunsuriyiinta ah oo lugu dhejiyey garoonadda Göteborg | Somaliska
Gidaaraddda muraaydaha ah ee xayeeysiiska lugu dhejiyo ee magaaladda Göteborg, ayaa maanta oo talaado ah waxeey dadka ku waaberiisteen sawiro barabagaando ah oo ay leeyihiin kooxaha cunsuriyiinta ah gaar ahaan wargeyska taageera afkaarta kooxahan ee Nya Tider lugu magacaabo.
Gidaaradda garoonadda Scandinavium iyo Ullevi, ayaa waxaa ku dhaganaa sawiro ay ka mid yihiin ra’iisal wasaaraha dalkaan Löfven oo madaxa u salaaxaya ruux gar weyn leh oo lugu fariisiyey gaariga carruurta ee barn vagn-ka loo yaqaano. Waxaa sidoo kale qeybo ka mid ah xayeysiiskaas ka muuqday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xaaqaya koofiyadaha meksikiykaanka caanka ku yihiin ee “Sombreros”
Shirkadda la yiraahdo Got Event oo ah mid maamulka gobolka leeyahay ayaa inta badan qaabilsan iibsashadda iidhehyada, waxaana ay ka soo iibsataa shirkadda adeegsaas bixisa ee la yiraahdo Gm-gruppen(kooxda Gm). Waxaa jira heshiis waadix ah oo la xirriirta iibsashadda iidhehda iyo sharuucda u degsan oo ah in iidhehdii la rabbo la qaada karo laSidaas na diidi karo.
” Waa qalad dhacay waxaanu la leenahay heshiis muuqda shirkada Gm-gruppen, taas oo ah in dhamaan fariimaha la xirriira cunsuriyadda, fuquuqista jinsiga iwm eeynaan raali ka aheyn, waxaana muuqata in heshiis-kaaasi aan la raacin” ayuu yiri Mikael Persson oo ka tirsan shirkadaasi oo misna intaa hadalkiisa ku daray in qalad dhacay.
“Waxaanu dooneeyna in cid kasta dareento in lugu soo dhaweeynayo garoonadeenna, hadana ma garan karo cawaaqibka arrintani ka dhaln karto, balse waxaan xirriir la sameeyey shirkadda Gm-gruppen” ayuu yiri Persson.
Wargeyskan ee ay adeegsan kooxahan afkaartood fog tahay ayaa waxaa muran badan ay ka dhex dhalinyeen maamulka bandhigga caalamiga ah ee Svenska bokmässan oo sanad walba lugu qabto magaaladda Göteborg. Kooxdan ka tirsan wargeyska Ny Tider ayaa lugu casumay ineey sanadkan ka soo qeyb galaan bandhigan. Hase ahaatee waxaa hareeyey buuq badan, ka dib markii 125 ka mid ah qorayaasha ka soo qeybgala sanad kasta ay qaadaceen ka qeybgalka bandhigga buugga sababo la xiriirro kooxahan xag jirka ah oo wargeyskooda lugu casumay.